Caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah (Arbetsgivardeklaration på individnivå) | Skatteverket
» Caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah
Laga billaabo bisha Jannaayo ee 2019 waxaa dhaqan gelaya xeerar cusub oo ku aaddan caddeynta shaqa bixiyaha. Qaar shaqa bixiyayaasha ka mid ahna wuxuuba xeerarku u dhaqan gelayaa bisha Luulyo 2018. Isbeddelku wuxuu ka dhiganyahay in adigaaga shaqa bixiyaha ah shaqa aad bil walba soo bandhigeysid lacagaha aad siisay qof walba iyo canshuurta aad ka goysay. Taas waxaa loogu yeeraa caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah.
Goormuu aniga i khuseynayaa ka shaqa bixiye ahaan?
Sida cusub ee loo soo bandhigayo caddeynta shaqa bixiyuhu waxay khuseysaa dhamaan shaqa bixiyayaasha laga billaabo xilliga bandhigidda ee Jannaayo 2019, laakin isbeddelka waxaa lagu sameynayaa laba tallaabood.
Shaqa bixiye ay tahay in uu maalin kasta diiwaan geliyo shaqaalaha goobta jooga (personalliggare), lehna 16 shaqaale ah ama in ka badan
Shirkadaha sida maqaayadaha, shirkadaha dhismada, labadaanyooninka iyo timajarayaasha ee maalin kasta diiwaan geliya shaqaalaha goobta jooga, lehna 16 shaqaale ah ama in ka badan waa in ay billaabaan in ay sida cusub u soo bandhigaan lacagaha ay bixinayaan laga billaabo 1 Luulyo 2018. Xagga shirkadaha dhismada kuwa soo geliya taariikhdan waa kuwa haysta koodka-SNI 41.
Shaqa bixiyayaasha kale
Laga billaabo 1 Jannaayo 2019 waxay xeerarka cusubi khuseeynayaan dhammaan kuwa ay khasabka ku tahay in ay caddeyn shaqa bixiye kusoo bandhigaan lacago ay bixiyeen iyo canshuur ay gooyeen. Macnaha caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed ee ugu horreysa waxaa la soo bandhigayaa bisha Faberaayo 2019.
Sideen ku ogaanayaa haddii aan soo gelayo xeerarka 1 Luulyo ee 2018 ama 1 Jannaayo ee 2019
(Hur vet jag om jag omfattas av reglerna den 1 juli 2018 eller 1 januari 2019?)
1 Luulyo 2018
Haddii 1 Luulyo ee 2018 ay waajib kugu tahay in aad maalin kasta qortid shaqaalaha goobta jooga, aadna leedahay 16 shaqaale ah ama in ka badan waa in aad billawdid gudbinta caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah. Laamaha soo gelaya waa maqaayadaha, shirkadaha dhismada, labadaanyooyinka iyo tima jarayaasha. Shirkadaha dhismadu waa in marka laga reebo waxa kor ku xusan ay xitaa haystaan koodka-SNI 41 (guri dhisid) si ay u billaabaan in ay 2018 soo gudbiyaan caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah. Caddeyntaada ugu horreysa waxay noqoneysaa tan aad soo bandhigeysid bisha agoosto ee 2018.
Haddii uu ku khuseeyo xeerka 1 Luulyo ee 2018 soo bandhigidda caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed waad sii wadeysaa xitaa haddii tirada shaqaalaha ama duruufaha kale ay gaadaal dambe iska beddelaan. Marka la tirinaya inta shaqaalaha ah ee ay shirkadi leedahay waxaa xitaa soo gelaya madaxa shirkadda, shaqaalaha fasaxa ku maqan iyo shaqaalaha si ku meel gaar ah u shaqaaleysan 1 Luulyo 2018.
Shirkadaha ka tirsan laamaha kale ee aan ahayn kuwa kor ku xusan ee ay waajibka ku tahay in ay maalin kasta diiwaan geliyaan shaqaalaha goobta jooga waxay billaabayaan soo bandhigidda caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed laga billaabo xilliga wax soo bandhigidda ee Jannaayo 2019.
1 Jannaayo 2019
Shaqa bixiyayaasha kale waxay billaabayaan in ay wax u soo bandhigaan si heer qofeed ah ugu horreyn caddeynta shaqa bixiyaha ee la gudbinayo bisha Faberaayo 2019 ee ku aaddan lacagaha la bixiyay xilliga wax soo bandhigidda Jannaayo 2019.
Shirkad dhismo oo aysan dhismadu ahayn waxa ugu muhiimsan ee ay ku hawlantahay ama aan lahayn koodka-SNI 41
(Byggföretag som inte har byggverksamhet som huvudsaklig verksamhet eller SNI-kod 41)
Haddii aad leedahay shirkad dhismo oo aysan hawsha dhismadu ahayn waxa ugu muhiimsan ee ay shirkaddu ku hawlantahay, aysanna shirkaddu haysan koodka-SNI41 waxaad caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah gudbineysaa ugu horreyn 2019. Haddii xilliga wax soo bandhigidda ee Luuliyo 2018 ay shirkaddu billaabeyso in ay soo bandhigto caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah ama Micnaha in shirkadda dhismadu, xilliga soo bandhigidda Luulyo ee 2018, ay soo bandhigi doonto caddeyn shaqa bixiye oo heer qof ahaaneed ah maaha mid la xiriirta oo keliya in maalin kasta la diiwaan geliyo shaqaalaha goobta jooga.
Wax dheeraad ah ka akhriso mawqifka Laanta canshuuraha (Skatteverkets ställningstagande, endast på svenska)
Waxan ayaa ka dhigan caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah
Isla sida maanta ay tahay ayaad bil kasta u gudbineysaa caddeyn shaqa bixiye. Farqigu waa in aad soo bandhigeysid lacagaha aad shaqada ku bixisay iyo canshuuraha aad ka goysa cid walba oo aad lacag u shubtay. Waxay taasi ka dhigantahay in aadan macluumaadkaas ku soo gudbineynin koontaroolka macluumaadka ee sanadlaha ah laga billaabo sanad dakhliyeedka 2019.
Caddeynta shaqa bixiyaha ee cusub waxay ka koobantahay laba qeybood, qeyb aad ku soo bandhigeysid macluumaad ku khuseeya adiga ka shaqa bixiye ahaan iyo qeyb aad ku soo bandhigeysid macluumaadka cid kasta oo aad lacag u shubeysidba goonideeda.
Waa si cusub oo wax loo soo bandhigo, oo leh adeeg cusub iyo foom cusub. Waqtiyada wax soo bandhigidda iyo taariikhda caddeyntu waa sidoodii hore. Lacagta khidmada ah ee shaqa bixiyaha xitaa waxaad u xisaabineysaa sideedii hore. Xeerarka cusub waxay ka dhiganyihiin oo keliya isbeddel ku yimid waxa lagu soo bandhigayo caddeynta shaqa bixiyaha.
Hubi in nidaamka shirkaddaada ee mushaaraadku uu cusbooneysiisanyahay
Waa muhiim in aad hubisid in nidaamka shirkaddaada ee mushaaraadku uu cusbooneysiisanyahay si aad u maareyn kartid caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed iyo in ruutiinka maareynta mushaaraadku uu ku habboonaado sidan wax loo soo bandhigayo.
Mabda’a lacagta kaashka ahi wili wuu shaqeynayaa, macnaha waa in aad soo bandhigtaa gunnada ama manaafacaadka aad bixisay waqtiga soo bandhigidda ee gunnada ama manaafacaadka aad u shubtay qofka, iyadoon la eegeyn in shaqada la qabtay waqti kale oo wax soo bandhigid iyo in kale. Waxaa taas ka reeban shidaalka xurta ah, wax dheeraad ah oo ku aaddan mabda’a lacagta caddaanka ah akhariso.
Wax dheeraad ah oo ku aaddan mabda’a lacagta caddaanka ah akhariso (endast på svenska)
Caddeymaha shaqa bixiyaha lama soo diri doono ama horay looma soo buuxin doono
Markii hore dhammaan caddeymaha shaqa bixiyayaasha horay ayaa shaqa bixiyaha iyo waqtiga soo bandhigidda loogu soo buuxin jiray, laakin taasi ma khuseyso caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed. Ma heli doontid caddeyn shaqa bixiye ee cusub oo laguu soo diray, horayna loo soo buuxiyay.
Adigaaga billaabi doona soo bandhigidda caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed laga billaabo xilliga soo bandhigidda Luulyo 2018 oo aan soo sheegin in aadan dooneyn foomam waraaqo ah waxaa caddeynta canshuurta dadban laguula soo diri doonaa foomkii hore. Marka aad soo gudbineysid Caddeynta shaqa bixiyaha ee heerka qof ahaaneed waxba taas kama soo qaadeysid ee waxaad wax ku soo bandhigeysaa oo keliya adeegga cusub ama foomamka cus-cusub.
Shaqa bixiyuhu qofta lacagta loo shubay wuu u sheegayaa waxa la soo bandhigay
Qofka lacagta loo shubay waxaad u sheegeysaa waxa Laanta canshuuraha loogu bandhigay tusaale ahaan faafaahinta mushaarka. Taasi waa in ay dhacdaa ugu dambeyn maalinta Laanta canshuuraha loo gudbinayo caddeynta shaqa bixiyaha.
Sanad dakhliyeedka 2019 macluumaad koontaroolid kama gudbineysid macluumaadka aad ku soo bandhigtay caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah.
Adigaaga, laga billaabo 1 Luulyo 2018, soo bandhigaya caddeyn shaqa bixiye oo qof ahaaneed waa in saas oo ay tahay aad si la mid ah sidii hore u gudbisaa macluumaad koontaroolid khuseeya lacagta aad bixisay oo dhan sanad dakhliyeedka 2018 , iyo isla macluumaadki hore kuwa la mid ah.
Så lämnar du arbetsgivardeklaration på individnivå
Waxaad caddaynta dakhliga shaqo-bixiiye ahaan ee heer shakhsi ah ku dhiibaysaa adeeg cusub oo ku jira Mina sidor ama foomam cusub. Wakhtiyada soo bandhigida iyo taariikhda caddaynta dakhliga waa isla sidii hore.
Adeega caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan oo ku jirta Mina sidor
Adeegan cusub magaciisu waa Caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan oo waxaad ka helaysaa dhinaca Mina sidor.
Faa’iidooyinka in caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah lagu dhiibo adeegan waa inaad helayso caawimaad dhanka xisaabinta iyo isu-geynta ah. Waxaa intaasi sii dheer inay badanaaba tani tahay ta ugu amaansan uguna dhakhso badan oo aad adigu helayso rasiidh ah in caddayntan dakhliga ay soo gashay.
Xiriirka ku geynaya Mina sidor:
Tani ayaad ka samayn kartaa adeegan Arbetsgivardeklaration
Gudaha adeegan waxaad baddeli kartaa ama ka saari kartaa macluumaad hore, ma ku xirna haddii kuwan la kaydiyay iyadoo adigu aad buuxisay ama gelisay fayl ay ku jireen macluumaad. Waxaa kale oo suurtagal ah in la dhamaystiro, la baddelo oo la saxeexo macluumaad, kuwa la geliyay iyo kuwa lagu buuxiyay labadaba. Waxaad isku dari kartaa in la diiwaan geliyo macluumaad iyo in la geliyo faylal wakhti isku mid ah.
Tijaabi qaybta tijaabada ee adeegan Caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan (Arbetsgivardeklaration)
Haddii aad doonaysid inaad eegto sida adeegani u eegyahay waxaad tani ka samayn kartaa qaybta tijaabada ee Hey’adda Canshuuraha, halkaasi ayaad ka helaysaa fursada in la tijaabiyo in:
La geliyo fayl ay ku jirto caddaynta dakhliga shaqo-bixiyo ahaan
Si toos ah macluumaadka loogu buuxiyo adeegan
La saxo caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee la soo gudbiyay
Waa inaad haysato aqoonsiga elaktarooniga ah si aad u awoodo tijaabinta qaybta tijaabada.
Macluumaadka aad ku arkayso qaybta tijaabada waa arrimaha ugu caadisan oo kuwani waa ”matalaad”. Tani micnaheedu waa in isbaddelada aad samayso aanay kaydsamayn iyo in xisaabinta la arkayaa ay ku salaysantahay macluumaadka marki horeba lagu buuxiyay.
Tijaabi qabyta tijaabinta ee adeegan, (endast på svenska)
Qofkee ayaa waxee ka samayn kara adeegan Caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan?
Waxa aad ka samayn karto adeegan waxay ku xirantahay nooca awooda ku gelida ee aad leedahay. Looma baahna in isla qofkii kaydiyay macluumaadka caddaynta dakhliga uu ahaado qofka isna saxeexaya caddaynta dakliga shaqo-bixiye ahaan. Iyadoo ku xiran awooda ku gelida ayaa dhowr qof iyo wakiilo ay geli karaan oo dhiibi karaan ama baddeli karaan macluumaadka ka hor intaan caddaynta dakliga la saxeexin oo aan la soo dirin.
Way fiicantahay in wakhti fiican oo ah ka hor intaan caddaynta dakhliga ee ugu horeysa la soo gudbin la hubiyo in dhamaan dadka ka shaqeeya arrimaha mushaahaarooyinka shirkada oo dhan ay haystaan ku gelida saxda ah.
Wakiilka haysta awooda ku gelida iyo wakiilka caddaynta dakhliga
Wakiil haysta awooda ku gelida ayaa saxeexi kara soona diri kara acluumaadkan. Adigaaga ah wakiilka caddaynta dakhliga uma baahnid codsi cusub laakiinse awoodaada ku gelida way shaqaynaysaa xitaa dhinaca in la soo gudbiyo caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heer shakhsi.
Akhri dheeraad ku saabsan wakiilka iyo awoodaha ku gelida (på svenska)
Wakiilka diiwaan gelinta – door cusub
Wakiilka diiwaan gelinta waa door cusub kaas oo khuseeya oo keliya caddaynta dakhliga ee shaqo bixiye ahaan ee dhinaca adeegan cusub. Wakiilka diiwaan gelinta wuxuu geli karaa dhamaan shaqooyinkan marka laga reebo in la saxeexo oo la soo diro. Wakiilkan waxaa kale oo uu soo gelin karaa oo hubin karaa faylasha, raadin karaa macluumaad la soo gudbiyay mar hore oo eegi karaa wax kasta oo la soo geliyay laguna kaydiyay adeegan.
Qofka maanta ah wakiiilka awoodaha ku gelida wuxuu isagoo sii maraya adeegan Wakiilka iyo awoodaha ku gelida uu diiwaan gelin karaa wakiilka diiwaan gelinta.
Aan ahayn wakiilka awoodaha ku gelida ama wakiil midnaba
Haddii aanad ahayn wakiilka awoodaha ku gelida ama wakiil midnaba laakiin aad haysato aqoonsiga elaktarooniga ee Iswiidhan waxaad fayl soo gelin kartaa adeegan. Adigu waa inaad laf ahaantaada gashaa Mina sidor oo doorataa Skatter och deklarationer ka dibna Filuppladdning - arbetsgivardeklaration.
Waxaad arki kartaa oo keliya haddii faylkaaga la akhrin karo lana kaydin karo inuu ahaado mid la sii diyaariyay. Adigu ma soo gudbin macluumaad dhinaca gudaha caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan qaabnaba oo xitaa ma arkaysid mana baddeli kartid macluumaadka la soo gudbiyay.
Adeega elaktarooniga iminka Moms- och arbetsgivardeklarationer
Marka aad bilowdo inaad soo gudbiso caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heer shakhsi markaasi maaha inaad sii isticmaasho adeega elaktarooniga minka jira ee Moms- och arbetsgivardeklarationer. Laakiinse adeegan elaktarooniga ah wuxuu u furnaan doonaa kuwa aan dhiibayn caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heer shakhsi inta ka horaysa 2019. Haddii aad u baahantahay inaad codsato saxid ama dib u eegida caddaymo dakhli shaqo-bixiyie ahaan oo hore loo soo gudbiyay, kuwaas oo aad ku soo dirtay dhinaca adeegan Moms- och arbetsgivardeklarationer, markaasi waa inaad xitaa tani ka samaysaa adeegan elaktarooniga ah.
Sidan ayaad u soo gudbinaysaa caddaynta dakhliga shaqo-bixiye ahaan ee heer shakhsi iyadoo loo marayo foomka
Haddii aad doonaysid inaad caddaynta dakhliga ee shaqo-bixiye ahaan ku soo gudbiso foomka markaasi waxaad isticmaalaysaa foomamka cusub ee loogu talogalay caddaynta dakhliga ee shaqobixiye ahaan ee heerka shakhsiga ah.
Caddaynta dakhliga ee cusub waxay ka koobantahay macluumaad heerka shaqo-bixiye ah iyo heerka gudoomaha lacagta labadaba. Foomamkan cusub dhinaca macluumaadka heerka shaqo-bixiye waxaad ku buuxinaysaa foomka Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786), macluumaadka heerka gudoomaha lacagtana waxaad ku buuxinaysaa foomka Arbetsgivardeklaration Individuppgift (SKV 4788).
Sidan ayaad u buuxinaysaa foomamkan
Foomamkan waxay leeyihiin taageerada buuxinta oo waad buuxin kartaa ka hor intaanad daabicin. Ka hor intaanad daabicin foomamkan waa inaad ku qorto qofka lacagta la siiyay lambarkooda shakhsiga ah, lambarka ururuka ama lambarkooda isku dubaridka iyo wakhtiga la soo bandhigayo ee adigu aad caddaynayso dakhligeeeda. Macluumaakan waa inay mar kastaba ku buuxsanaadaan foomamka oo dhan, micnihii heerka shaqo-bixiiye iyo heerka gudoomaha lacagta labadaba.
Adigu waa inaad ku buuxiso qofka lacagta la siiyay lambarkooda shakhsiga ah, lambarka ururuka ama lambarkooda isku dubaridka
Si loo awoodo in la daabici karo foomka Arbetsgivardeklaration Individuppgift (SKV 4788) waa inaad xitaa ku buuxiso qofka lacagta la siiyay lambarkooda shakhsiga ah, lambarka ururuka ama lambarkooda isku dubaridka. Lambarka shakhsiga ah, lambarka ururuka ama lambarka isku dubaridka ee saxda ah waxaad ku buuxin kartaa isagoo wata labada lambar ee sanadka ugu horeeya ama iyagoo aan wadan xariijinta ka dambeysa taariikhda dhalashada.
Qor lambaro si waadax ah loo arkayo
(Skriv tydliga siffror)
Haddii aad doorato inaad daabacdo foomkan oo aad ku buuxiso gacanta markaasi waxaa muhiim ah inaad si waadax ah u qorto lambarada. Hey’ada Canshuuraha way isgaan-garaysaa oo si elaktaroonig ah u turjumtaa caddaymaha dakhliga ee warqad ahaan ah.
Buuxi oo keliya afar-geesyada aad u hayso cadad lacag oo aad caddaynayso dakhligeeda
(Fyll bara i de rutor där du har belopp att deklarera)
Buuxi oo keliya afar-geesyada aad u hayso cadad lacag oo aad caddaynayso dakhligeeda oo afargeesyada kalena ku dhaaf iyagoo banaan. Ha ku buuxin ebaryo iyadoo aan loo baahnayn. Welibana marnaba ha qorin calaamadaha hakadka, joojinta, xariijin ama calaamada lacagta qadaadiicda ah.
Haddiiba taas badelkeeda isticmaasho adeegan Caddaynta dakhliga ee shaqo-bixiye ahaan ee ku jira Mina sidor markaasi kantaroolada atoomaatiga ah ayaa kaa caawinaya inaad si sax ah u soo bandhigto. Cinwaanka ay tahay inaad u soo dirto foomamkan waxaa laga arkayaa foomkan.
Xiriirka afar-gees ilaa afar-gees (på svenska, Så här fyller du i arbetsgivardeklarationeen)
Xiriirka sharaxaada farsamo oo af-ingiriisi ah